Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Aaron Wan-Bissaka Storyhood Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubadda cagta oo leh naaneyska "Spider". Sheekada Wan-Bissaka ee Waalidka-Bissaka iyo Warqada Aan Bixin Karin waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Aaron Wan-Bissaka Sheekada Carruurnimada - Falanqaynta
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu awood u leeyahay inuu jiido taakuleeyn cajiib ah. Si kastaba ha noqotee, dhowr qof oo keliya ayaa ka fiirsada Haaran Wan-Bissaka 'Biography' oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilowno.
Aaron Wan-Bissaka Storyhood Plus Xogta Warka Xogta - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Bilowgii, Aaron Wan-Bissaka wuxuu ku dhashay maalinta 26th ee bisha November ee 1997 ee London Borough of Croydon ee England. Waa kan labaad ee laba carruur ah u dhashay hooyadiis, Elizabeth iyo aabihiis, Ambroise.
Aaron Wan-Bissaka waalidiinta Ambroise iyo Elizabeth. Heerarka: Sun.
Britishka iyo Congolese ee qowmiyadaha madowga ah ee asalkoodu yahay Afrika ayaa waxaa kiciyay labada waalid ee New Addington oo ku taal Croydon, halkaas oo uu ku soo koray walaalo weyn oo loo yaqaan Kevin.
Aaron Wan-Bissaka wuxuu ku soo koray Addington oo ku yaal Croydon oo ay weheliso walaalkiis ka weyn Kevin (Left). Amaah: Sun.
Kobcinta New Addington, Wan-Bissaka ayaa la qabatey inay kubada cagta ka ciyaaraan da 'aad u yar. Jacaylka uu u leeyahay cayaaruhu ma ogaanin xuduud iyo meel kasta oo ku habboon in la jiido xoogga culeyska oo ay ku jiraan qolkiisa qoyskiisa.
Natiijo ahaan, qaar ka mid ah alaabooyinka aan la joogin ee qolka fadhiga, oo ay ka mid yihiin wasiirada muraayadaha jaban ayaa ah waxyeello ka soo gaartay dhalinyarada Wan-Bissaka ee kubadda cagta gudaha.
Young Wan-Bissaka ayaa jabiyay kamarad quraarad ah iyada oo kubadda lagu ciyaaro qolka fadhiga. Heerarka: The Sun iyo Sun.
Aaron Wan-Bissaka Storyhood Plus Xogta Warka Xogta - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Asalka Wan-Bissaka ee waxbarashadiisa waxaa ka mid ah waxbarashadiisa ku jirta Nabadgelyada Dugsi ee Dugsiga Hore ee Catholic iyo Daryeelka ee New Addington, England. Inta dugsiga laga joogo, Wan-Bissaka ayaa isku xirta tacliinta kubadda cagta ee kubadda cagta ee dugsiga, beeraha iyo jidadka.
Young Wan-Bissaka oo kubad ku ciyaara meel aan la garaneynin. Amaah: Sun.
Wan Bissaka oo da'diisu ahayd 11, ayaa tayadiisa u muuqatay mid la dareemayo, horumar ah oo ku wargeliyay inuu isqoristiisa ku qorayo Crystal Palace akadeemiga halkaasoo uu bilaabay mustaqbalkiisa ciyaareed kubada cagta.
Aaron Wan-Bissaka Storyhood Plus Xogta Warka Xogta - Hawlaha Wakhtiga Hore iyo Waddada Si Loogu Sameeyo Sheeko
Crystal Palace ayaa noqotay kooxdii uu Wan Bissaka ku qaadan lahaa xirfadiisa ciyaareed oo dhan. Si kastaba ha noqotee, safarku ma aheyn sida geesaha saafiga ah ee isku xirka qoraalka ee loo adeegsado bani-aaddan.
Wan Bissaka ayaa laba sano ka hoos marisay hudheelka, ama way maqnaanayaan tababarka ama dib u soo noqoshada dib u eegista aad u daallan. Si wax looga qabto dhibaatooyinka, markaa 14-da ayaa si qarsoodi ah u qaatay cunto qalad ah oo ay ka koobnayd kookarka, cabitaannada jirka, digaaga iyo chips.
Wan-Bissaka ayaa si qarsoodi ah u dhaleeceeyay cunto qaldan intii lagu jiray xirfadiisii ​​hore.
Markii ugu sarreysey ee Wan-Bissaka ee jahawareerka, Crystal Palace waxay tixgelisay inuu sii daayo. Si kastaba ha ahaatee, kulan lala yeeshay aabaha da 'yarta - Ambroise - ayaa akadeemiyadda ka dhigay inuu siiyo muddo saddex bilood ah oo tijaabo ah.
Aaron Wan-Bissaka Storyhood Plus Xogta Warka Xogta - Sare u qaado sheekada
Sameynta mudnaanta tijaabada ah, Wan-Bissaka ayaa aad u riyaaqay, waxaana u dhex maray wadamada ku jira sanadaha 5 (2011-2016). Wan-Bissaka ayaa bilaabay inay la soo wareegto kooxda koowaad ee Crystal Palace xagaaga ee 2017 ee xilli-ciyaareedka ka hor inta uusan ciyaarin kulamo saaxiibtinimo.
Waxa uu kulankiisii ​​ugu horeeyay u ciyaaray Crystal Palace intii uu socday kulankii Premier League ee Tottenham ay la ciyaartay 25th February February 2018, waxaana lagu abaalmarinayay qaab ciyaareedkiisa kulamada horyaalka. Ma aheyn wax dheer ka hor inta uusan loo magacaabin ciyaaryahanka Crystal Palace ee bisha March ee 2018, waxaana ugu dambeyntii noqday ciyaaryahankii kooxda ee xilli ciyaareedkii 2018 / 2019. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Wan-Bissaka ayaa loo magacaabay ciyaaryahanka Crystal Palace ee 2018 / 2019. Amaah: Premier League.
Aaron Wan-Bissaka Storyhood Plus Xogta Warka Xogta - Xaqiiqooyinka nolosha qofka
Wan-Bissaka wali lama guursan xilliga qorista bani-aaddan. Waxaan xaqiiqooyin ku soo qaadnaa taariikhda taariikhda shukaansi iyo xaalada xiriirka hadda jira. Wan-Bissaka looma ogaanin in ay taariikhday haweeney kasta, mana uusan haysan saaxiibtiis May May 2019.
Aaron Wan-Bissaka waa mid kaliya oo ah May 2019. Heerarka: LifeBogger iyo 90Min.
Si kastaba ha ahaatee, ma jirto wax been abuur ah oo sheegaya in Wan-Bissaka lagu raadinayo gabdho. Si kastaba ha ahaatee, Crystal Palace akademiga qalinjabiya oo aan lahayn wiil ama gabdho (s) oo ka baxsan garab daa'im ah ayaa si buuxda diirada u saaraya inuu mustaqbalkiisa u qaato meelo waaweyn.
Aaron Wan-Bissaka Storyhood Plus Xogta Warka Xogta - Xaqiiqooyinka Nolosha Qoyska
Wan-Bissaka waxay ka timaadaa asal qowmiyadeed oo qoys. Waxaanu xaqiiqooyin ku siinaynaa noloshiisa qoyskiisa.
Ku saabsan Wan-Bissaka's Aabbaha: Ambroise waa Wan-Bissaka aabihiis. Aabaha dhalay taageerayaasha labo waa muwaadin reer Congo ah oo u ciyaara kubadda cagta ee kooxo tuulo ah ka hor inta uusan ka soo cararin waddanka Afrika ee dagaalka ka dhacay sanadka 1997. Waxaa loo qoondeeyay in lagu ciyaaro kaalin mugle ah oo loogu talagalay hubinta in wiilashiisa ay u soo baxaan tababarka kubada cagta inta lagu jiro noloshooda hore.
Aaron Wan-Bissaka iyo Aabihiis Ambroise. Amaah: Sun.
Ku saabsan Wan-Bissaka's Hooyada: Elizabeth waa Wan-Bissaka hooyadii. Sida ninkeeda iyo carruurteeda, Elizabeth waa Gunner ama Gunners oo Arsenal ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale taageertaa Crystal Palace iyada oo tixgelineysa xaqiiqda ah inay tahay kooxdii wiilkeeda u keentay inay hormariso. Waxaa loo aqoonsaday in ay Wan-Bissaka siinayso sida ugu fiican ee hooyada uurka leh inta lagu guda jiro nolosheeda hore iyo bixinta taageero anshax markii uu u baahdo.
Aaron Wan-Bissaka iyo hooyadiis Elizabeth. Amaah: Sun.
Ku saabsan walaalaha Wan-Bissaka ee walaalaha ah: Wan-Bissaka ma lahan walaasha (walaalaha), laakiin walaalkiis ka weyn ee loo yaqaan Kevin. Walaalaha waliba waxay ku koray kubadda cagta wadooyinka iyo beeraha. Si kastaba ha ahaatee, Kevin ma uusan ku qorneyn akadeemiga koox weyn. Waxa uu ciyaaray ama Kingstonian iyo Walton Casuals ka hor inta uusan kabihiisa xirin da'da 21.
Walaalkii Wan-Bissaka Kevin ayaa arkay 2nd oo ka soo jeeda sawir Qoyska. Amaah: Sun.
Ku saabsan Qaraabada Wan-Bissaka ee Qaraabada: Ka fogaanshaha qoyska Wan-Bissaka, wax yar ayaa laga yaqaanaa awowgiisa awoowe iyo sidoo kale awoowe iyo awoowe. Intaa waxaa dheer, Wan-Bissaka adeer, adeer iyo ina-adeer ayaa weli lagu ogaanayaa dhacdooyinka la taaban karo ee sheekadiisa carruurnimada iyo taariikh nololeedka. Isla markaasna wuxuu ku socdaa guddiga niece iyo wiilasha.
Aaron Wan-Bissaka Storyhood Plus Xogta Warka Xogta - Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha
Maxaa ka dhigaya saxeexa Wan-Bissaka? Fadlan ku fadhiiso sidaan kuu soo saarno shakhsiyada Wan-Bissaka si ay kaaga caawiyaan inaad hesho sawir buuxa oo isaga ah. Si aad u bilowdid, qofka Wan-Bissaka ee qofku waa isku-dhafka Sagittarius Nadaafadda.
Waxa uu yahay mid adag, mid fiican, midnimo, iyo faahfaahin dhexdhexaad ah oo faahfaahsan oo ku saabsan noloshiisa gaarka ah iyo tan gaarka ah. Waxa uu leeyahay dhowr xiiso iyo hiwaayado kuwaas oo ay ka mid yihiin naqshadeynta, ciyaarida ciyaaraha fiidiyowga iyo dabaasha.
Dabaasha waa mid ka mid ah hawlaha wakhti-wadaha ee Wan-Bissaka. Amaah: Instagram.
Aaron Wan-Bissaka Storyhood Plus Xogta Warka Xogta - Xaqiiqooyinka hab nololeedka
Wan-Bissaka saafi ah ayaa dib-u-eegis lagu sameeyay waqtiga qorista. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu leeyahay qiimaha suuqa ee € 25,00 Million. Falanqaynta mushaharka bil kasta ee mushaharka iyo kharashyada kharashka ayaa muujinaya inuu ku nool yahay qaab nololeedka konservative ee celcelis ahaan mushaharkiisa inta badan dakhligiisa uu ka soo jeedo asal ahaan kubada cagta.
Dhanka kale, wax yar ayaa loo yaqaanaa qiimaha dhabta ah ee aqalka ah ee uu ku nool yahay iyo sidoo kale gaarihiisa uu soo ururinayo maaddaama uu si dhif ah u dareemayo gaadiidka xeryaha tababarka ama ka qaybgalaya xafladaha abaal-marinta. Si kasta ha ahaatee, wuu ogyahay sida loo fasaxo dalxiisyada meelaha qaaliga ah ee dunida ku yaalla.
Aaron Wan-Bissaka ayaa ku riyaaqay fasaxiisa fasaxii Dubai. Amaah. Instagram
Aaron Wan-Bissaka Storyhood Plus Xogta Warka Xogta - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Si loo soo gebogebeeyo taariikhda carruurnimada Wan-Bissaka iyada oo ah sheekooyin aan la garanayn ama ka yar oo la yiraahdo oo dhif ah waxaa ku jira bio.
Wan-Bissaka waxay leedahay tattoos aan macquul ahayn oo macnaheedu aan wali loo sheegin xilligii qorista.
Waxaa si aad ah u doonaya kooxo waa weyn oo kubadda cagta ah oo ay ku jiraan Manchester United, Chelsea iyo Manchester City xilliga qorista.
Aaron Wan-Bissaka ayaa dhawaan soo jiidatay kooxaha xiisaha badan ee horyaalka. Amaah: Daily Express.
Isagoo ka hadlaya diintiisa, Wan-Bissaka wuxuu ku dhashay kuna koray Masiixi ahaan. Intaa ka badan, wuxuu ku biiray dugsiga Catholic. Si kastaba ha ahaatee, weli wali wuxuu ka hadlayaa arrimaha ku saabsan rumaysadka.
Daafac midig ayaa ka mid ah ciyaartoy dhowr ah oo aan weli la ogaanin cabitaanka sigaarka ama sigaarka.
Aaron Wan-Bissaka Storyhood Plus Xogta Warka Xogta - Soo koobista muuqaalka
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Wan-Bissaka ee Waalidka Caruurnimada iyo Wacdiyooyinka Xogta Aan Laheyn. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Tammy Abraham Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Harry Kane Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
Nathaniel Clyne Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la isku qorin